हेल्मुट कुटिन सानो छँदा – RAJESHares KOIRALAnd
हेल्मुट कुटिन सानो छँदा
May 3, 2011 July 26, 2012
घोटा चढ्दा पिटाई
हेल्मुट कुटिन एस.ओ.एस. नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एस.ओ.एस. को स्थापना सन् १९४९ मा भएको हो । कुटिनको जन्म सन् १९४१ मा युरोपेली मुलुक इटालीको बोल्झानो भन्ने ठाउँमा भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धअघि बोल्झानो अष्ट्रियामा थियो । त्यसैले जन्मदा उहाँ अष्ट्रियाली बालकका रूपमा जन्मनुभएको हो । उहाँ आफैं एस.ओ.एस. मा हुर्कनुभएको हो । सन् १९५३ देखि उहाँ एस.ओ.एस.मा बस्न आउनुभयो । एस.ओ.एस.को पहिलो बालग्राम अष्ट्रियाको इम्स्ट भन्ने ठाउँमा खुलेको हो । त्यही बालग्राममा कुटिन हुर्कनुभयो । एस.ओ.एस.मा संस्थापक हर्मन माइनरले उहाँलाई पाल्नुभयो । युवा भएपछि कुटिन इन्स्ब्रुस्क भन्ने ठाउँमा रहेको युवाग्राममा बस्न आउनुभयो । इन्स्ब्रुस्क विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढ्नुभयो । सन् १९६७ मा हर्मन माइनरकै सल्लाहमा कुटिनले पर्यटनका क्षेत्रमा काम थाल्नुभयो । उहाँ प्रशिक्षक पनि हुनुभयो । एस.ओ.एस.का लागि उहाँको पहिलो काम भियतनाममा भयो । अहिलेको हो ची मिन्ह सहरमा एस.ओ.एस. बालग्राम बनाउन पाउनुभयो । त्यो भियतनामको पहिलो बालग्राम थियो । सन् १९६८ मा उहाँ भियतनामकै बालग्रामको निर्देशक नियुक्त हुनुभयो । त्यसबेला भियतनामी बालग्राम विश्वकै ठूलो थियो । किनभने कुटिनले भियतनाममा अझ धेरै बालग्राम बनाउनुभएको थियो । उहाँ भियतनाममा रहँदा युद्ध भयो । सन् १९७५ मा युद्ध सकियो । सन् १९७६ मा उहाँले भियतनाम छाड्नुभयो । राम्रो काम गरेबापत सन् १९७१ मा उहाँलाई एसियाका लागि एस.ओ.एस.का विशेष प्रतिनिधि बनाइयो । उहाँ एसियाका लागि खटिएको केही वर्ष नबित्दै ५० भन्दा बढी बालग्राम र ५० भन्दा सहयोगी केन्द्र बने । सन् १९८५ मा हर्मन माइनरको निधन भयो । माइनरको निधनले विश्वका धेरैलाई रुवायो । माइनरको काम उहाँका नजिकैका सहयोगी कुटिनलाई जिम्मा लगाइयो । सन् १९८८, सन् १९९३, सन् १९९८ र सन् २००३ मा लगातार कुटिन निर्वाचित भएर एस.ओ.एस.का अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख हुँदै आउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुखका रूपमा काम थालेपछि उहाँले भियतनाममा रोकिएको बालग्राम बन्ने काम सन् १९८७ मा सुरु गर्नुभयो । त्यसै वर्ष चीनमा दुईटा बालग्राम बने । ती चीनका पहिला बालग्राम थिए । हर्मन माइनरजस्तै कुटिनले पनि विवाह गर्नुभएको छैन । उहाँ एस.ओ.एस.लाई नै आफ्नो परिवार ठान्नुहुन्छ । उहाँ हालै नेपाल आउनुभएको थियो । यसपटक कुटिनका बाल्यकालका केही सम्झना :
म जन्मँदा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो । युद्धले विश्व नै डरलाग्दो भएको थियो । त्यसैले त्यसबेलाका अनेकन घटना छन् ।
अहिले म नेपालमा जे देख्छु, अष्ट्रिया त्यसबेला त्यस्तै थियो । मानिस गरिब थिए । देशमा शान्ति थिएन । लामो पेन्ट लगाउने इच्छा हुन्थ्यो । तर स्टकिङ र सर्ट लगाएर चित्त बुझाउनुपर्थ्यो । त्यसबेला देशमा खानाको कमी थियो । स्कुलमा माया दिने अवस्था थिएन । धेरै जनाको घर थिएन । त्यसबेलाका दिन हामीसँग केही नभएका दिन थिए ।
एकपटकको कुरा हो । म र मेरो दाइ घर छाडेर अलि टाढा गयौं । अग्लो ठाउँ थियो । त्यहाँ घोडा चर्थे । हामी साना भएकाले आमाबुबाले त्यहाँ जानुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो । तर हामी गयौं । दाजुले घोडा चढ्दा बस्न प्रयोग हुने सामान बनाउनुभएको थियो । हामी घोडा चढ्यौं । त्यत्तिकैमा घोडा पाल्ने किसान आए । उनले हामीलाई देखे । कुटेर खेदाए । घोडामाथि राख्ने त्यो सामान भाँचिदिए ।
पिट्ने कुरा गर्दा म स्कुलमा पिट्ने गरेको सम्झन्छु । स्कुलहरूमा सजाय दिने चलन थियो । लाठीले पिटिन्थ्यो । हामी ठूला हुँदै जाँदा स्कुलमा पिट्ने चलन हराउँदै गयो । म उत्तिको पिटाइ खाने विद्यार्थी होइन ।
मैले ९ वटा फरक स्कुलमा पढें । देशमा अशान्ति भएकाले यस्तो भएको हो । सुरुका दुई स्कुलमा म राम्रो विद्यार्थी थिएँ । तेस्रो स्कुलमा मेरो पढाइ बिग्रियो । चौथो र पाँचौंमा असाध्यै राम्रो भयो । छैटौंमा ठिक्क रह्यो । कलेजमा एक वर्ष फेल भएँ । तर पछि पास भएँ ।
मेरी दिदी हराउनुभयो । उहाँको निधन भएको एक वर्षपछि पत्ता लाग्यो । त्यो देखेर आमाको तत्काल निधन भयो । मभन्दा माथिका चार दाजु र दिदी पनि युद्धमा बेपत्ता भए । परिवारमा म र बुबामात्र रह्यौं । यत्रो दुःख बुबाले सहन सक्नुभएन । अनि म एस.ओ.एस. मा भर्ना हुन पुगें । एस.ओ.एस.को हाम्रो परिवारमा ९ सदस्य थियौं । सातजना केटा र दुई केटीको परिवार थियो । त्यसबेला दुःख हुन्थ्यो । अहिले त एस.ओ.एस. मा धेरै सुख छ । हामी जे पाउँथ्यौं, बाँडेर खान्थ्यौं अनि मिलेर खेल्थ्यौं । किताब भए, पालोपालो गरेर पढ्थ्यौं । अहिले जे पनि सुविधा छ ।
मलाई हिउँमा चिप्लेटी, फुटबल, ह्यान्डबल र पौडी मन पर्थ्यो । हिउँको चिप्लेटी र फुटबलचाहिँ मलाई धेरै मनपर्थ्यो । तर फुटबल खेल्न जुत्ता हुँदैनथ्यो । खाली खुट्टा खेल्नुपर्थ्यो । मलाई सानो छँदा अंगुर, स्याउ र स्ट्रबेरी मनपर्थ्यो ।
त्यसबेला केटाले मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने थिएन । म त कक्षामा दुई केटीहरूका बीचमा बस्थें । कलेजमा भने केटा र केटीको फरक कक्षा र फरक छात्रावास थियो । एकतर्फबाट अर्कोतर्फ जान मिल्दैनथ्यो ।
स्कुल पढ्दा मलाई इतिहास, गणित र भाषाजस्ता विषय मनपर्थ्यो । स्कुल पढ्दा यति अंक ल्याएर प्रथम, द्वितीय हुन्छ भन्ने थिएन । ‘ग्रेडिङ’ हुन्थ्यो । राम्रो विद्यार्थी, ठिक्कको विद्यार्थी र कमजोर भनेर मात्र छुट्टन्थ्यो ।
मसँग पढेका साथीहरू अहिले अष्ट्रियामा नगरप्रमुख, सांसद्, नगर परिषद्का सदस्य आदि बनेका छन् ।
एस.ओ.एस.ले विश्वका १ सय ३२ देशमा सेवा गरिरहेको छ । ती देशमा ४ सय ७० वटा बालग्राम छन् । ३ सय ५४ युवाग्राम छन् । २ सय ६१ किन्टरगार्टेन छन् । १ सय ९० वटा एस.ओ.एस. स्कुल छन् । ३ सय ५९ सामाजिक केन्द्र, १ सय १५ व्यावसायिक तालिम केन्द्र, ५६ औषधोपचार केन्द्र र २० वटा आपतकालिन उद्धार कार्यक्रम छन् । यसरी कूल सेवा केन्द्र वा शाखा १ हजार ७ सय ९९ पुग्छन् । सबैबाट १० लाखभन्दा बढी बालबालिका, युवाले सेवा पाएका छन् । राजधानीको जोरपाटी, सानो ठिमी र कोटेश्वरमा शाखा छन् । सुर्खेत, पोखरा (रामबजार र छोरेपाटन), बनेपा (काभ्रे), इटहरी र चितवनमा एस.ओ.एस. का शाखा छन् । बुटवलमा नयाँ बन्दैछ ।
(शब्द : राजेश कोइराला, तस्बिर : नवराज वाग्ले, २०६४ माघ १८ मा कान्तिपुर दैनिकको बालकोसेली कोपिलामा प्रकाशित)
One thought on “हेल्मुट कुटिन सानो छँदा”
मामा, खुसी लाग्यो. यो पेज एसओएस को वेब पेजमा, फेसबुकका सोस ग्रुपहरुमा नि राख्नपर्ने खालको रहेछ/